Turkey Akwa Speed ​​Train Stations | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraTurkey Akwa Speed ​​Train Stations
11 / 11 / 2019 06 Ankara, 42 Konya, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Turkey
Turkey Akwa Speed ​​Train Stations; Mgbe mmejuputa atumatu elu Speed ​​Railway na Ankara-Istanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Bursa na Ankara-Izmir, wuchara owuwu ogige NYT, nke di nkpa dika uzo ugboala di na mbu ma buru uzo wuo ihe ndi ozo diri ebe ha. amalitela ọmụmụ ihe.
Emebewo ọdụ ụgbọ Ankara YHT site na ịtụle ụkpụrụ mba ụwa yana site na inyocha ihe owuwu, okirikiri, ojiji na ụdị ụdị ụgbọ ala dị elu na mba ndị ọzọ.
Oru ngo a, bu n’uche ime ka Ankara Station na ihe ndi gbara ya gburugburu buru ihe ha na achoro maka isi obodo, bu nke a n’adochiri anya ihe ohuru nke mpaghara ahu ma gosiputa osiso n’iru ya na nnabata ya na nghota na nghota nke ugbua.
Mpaghara ụlọ 194 puku m2 na 33,5 puku m² ụlọ obibi ebe obibi ebe obibi NYT, ebe a na-ere ihe, ebe a na-ere nri, ebe a na-adọba ụgbọala na ime ụlọ, ụzọ ụgbọ oloko na mpaghara.
Emere ebe uzo ohuru a nwere ogwe aka nke ihe ngbako nke 12 n'ogologo ahịrị na ahịrị 400, nke nwere ike ịnabata 3 YHT setịpụrụ n'otu oge. Ankara Ankara High Speed ​​Train Station 6, nke e wuru n'okpuru Mo-wuo-Nbufe-Mbugharị arụnyere na October 29.
Ụlọ okporo ụzọ Konya YHT
Emeziela ma rụọkwa ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Konya ugbu a iji kwadebe maka ụgbọ elu YHT. Agbanyeghị, ịnweta oghere dị ebe a nwere oke na ntinye nke ọdụ na etiti obodo adịghị mma. Site na mmalite nke eriri Konya-Istanbul, ọkachasị akara Ankara-Konya, ezughi oke iji nweta ikike ndị njem nọ ugbu a. Maka nke a, a na-ewu ebe ọhụrụ na Konya Bugdaypazari Ọnọdụ ma na-eme atụmatụ itinye ya n'ọrụ na njedebe nke 2018.
Dị ka ọ dị n’ọdụ ụgbọ Ankara YHT, a na-arụ ebe a na-arụ ọrụ, nke ga-agụnye ebe ịzụ ahịa, ụlọ nri, ebe a na-adọba ụgbọala na ebe a na-adọba ụgbọala.
A na-ewu ụlọ ebe ụgbọ oloko nke YHT dị na hekta 157,7, ma enwere Eryaman YHT Train Station, Ngalaba Nlekọta Speeddị Mkpa Elu na Ulo na ebe a na-ahụ maka ogige ahụ.
N'ikwekọ na ebumnuche ndị 2023 nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè, Ankara ga-abụ ebe etiti ike ndọda nke netwọkụ Njikwa Obodo nke YHT. Maka nke a, a na-ahazi etiti etiti netwọọk HHT Care ka Ankara. Ankara (Erya-man) High Speed ​​Train Main Mmezi Ihe e dechara.
Mgbe ị na-ekpebi ebe ebe nrụzi dị; xdabere n'ọdụ ụgbọ elu ọpụpụ dị ugbu a, ịnọ nso n'okporo ụzọ ụgbọ oloko, enweghị ebe tọgbọrọ chakoo ma ọ bụ nke dị ala ma ọ bụ nke na-erughị ala, na-akwụ ụgwọ obere ego, nnabata usoro mgbatị ahụ na ihe nnweta.
Nzube ebumnuche na ọdụ nke ihe omume YakT nke a ga-eji mee ihe na ntanetị nke YHT chọrọ mpaghara mmechi nke 46.568 m2, mkpa maka ọzụzụ maka ọzụzụ nke ndị ọrụ ruru eru na arụmọrụ ụgbọ elu dị elu, yana nguzobe ọdụ ụgbọ oloko nke YHT na Etimesgut / Ankara maka mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị njem.
YHT (Eryaman) ụlọ ọrụ nlekọta bụ isi guzobere na Etimesgut;
N'oge ọrụ mmezi, a gaghị ekunye ikuku ga na ikuku, a gaghị eji kemịkal mebie ala na mmiri,
Mmanụ ala, wdg nke ahụ nwere ike ime n’oge arụmọrụ. Ngalaba na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ na kemịkal ga-adị na Nlekọta Mmezi maka ihe lara n'iyi,
●● inlọ Train Wash nwekwara ngalaba a na-ahụ maka mmiri, a ga-enwetaghachi 90% nke mmiri ahihia,
A ga-echekwa mmanụ ga-agbakọ na ebe a ga-enweta ya na ebe a ga-edebe mmiri ma debe ya,
Ọ dịghị mmanụ ga-anyụpụ ntaramahụhụ ọ bụla.
●● manegbọ okporo ígwè agaghị eme mkpọtụ n'ihi akụrụngwa eletrik nke ihe owuwu ahụ.
N’ihi nke a, a na-eme nnyocha omumu ihe maka ihe mmemme HHT nke ọma; A tụlekwara ụkpụrụ ahụike mmadụ na gburugburu ebe obibi. Emechaala ihe owuwu nke NYT.
E mepere ọdụ Yeni Eryaman YHT n'akụkụ ụlọ ahịa mmezi ya. A na-eme ọdụ ụgbọ elu a na-ewu ewu na ụgbọ elu dị elu na mpaghara ọdịda anyanwụ na ọdụ ọdụ ọhụrụ a kama Xinjiang. Emebela Eryaman YHT Station ka ọ dịrị na ogige YHT, nke dị n'etiti etiti Ayaş Road, Ankara Ring Road na Istasyon Street wee jikọtara ya na usoro ụgbọ oloko nke ime obodo.
Mgbako Ọgbọ Etimesgut
Bursa, Turkey ga jikọọ dum Speed ​​Train Line
Onyeisi oche nke agha Turkey kasị Ụgbọ mmiri hadon ...
Ụlọ ọrụ Hikayeli Train
10. UIC World Congress on High Speed ​​Okporo ígwè na Turkey
Around Bursa, Turkey Author Train Action ...
Turkey Kasị Ukwuu ugbo Train Your mbụ Erdei ...
Nkwupụta okike: nhicha nke ụgbọ njem ndị njem işi
Nleba anya Okike: Emi odude ke Kütahya na Tavşanlı Train Station…
Ụgbọ okporo ígwè anyị aghọwo Plateau Nkiri
Usoro oge na-amalite na YHT Stations
Ntinye ụgbọ okporo ígwè TCDD maka chaja maka ndị nwere nkwarụ…
TCDD gaa Rent Sirkeci na Haydarpaşa Train Stations
IMM, Sirkeci na Haydarpaşa Train Station Olarak
Tebụl oroma maka ndị nwere nkwarụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè YHT
Na-emepụta YHT Gar Complex
Ụgbọ okporo ígwè Konya High Speed